अष्ट्रेलिया पढ्न गएका लगभग पाँच सय नेपाली युवती “कल गर्ल” सेक्स ब्यवसायमा, घर घरमा सेवा ! «
अष्ट्रेलिया पढ्न गएका लगभग पाँच सय नेपाली युवती “कल गर्ल” सेक्स ब्यवसायमा, घर घरमा सेवा !
प्रकाशित मिति : २० पुष २०७५, शुक्रबार २०:५८
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवतीले प्रायः ‘लोकान्टो’मा खाता खोलेका हुन्छन् । सकुन्तला सिड्नी वरिपरि छरिएर रहेका नेपाली मध्येकी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसबाहेक राजधानी क्यानबेरा, मेलबर्न, ब्रिसबेनलगायतका ठाउँमा रहेका नेपाली युवतीले पनि यसरी सेवा दिनका लागि यौनलाई पेशा बनाउने गरेका छन् । उनीहरू प्रति घन्टाका दरले सेवाग्राहीसँग शुल्क लिने गर्छन् । यौन पेशा भने उनीहरूको प्रमूख पेशाचाहीँ होइन । अन्य कामलाई प्रमुख पेशा बनाएर अतिरिक्त तर बलियो आम्दानीका लागि यो पेशामा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
नेपाली समुदायको जनसंख्या थपिँदै गएपछि कलगर्लका रूपमा नेपाली युवतीको संख्या पनि बढिरहेको अनुमान गरिएको छ ।-नंया बाटोबाटवर्ष २४ की सकुन्तला (नाम परिवर्तन) अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा रहेको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छिन् । खर्च जोहोका लागि क्लिनिङ र मसाज सेन्टरमा काम गर्छिन् । त्यसबाहेक उनको ठूलो आम्दानीको स्रोत भने इन्टरनेटमार्फत बोलाएका घरमा गएर ‘सेक्स’को सेवा दिनु हो । न्यु साउथ वेल्स राज्यको आटअमनमा रहेको क्लिनिङ र पारामाटामा रहेको मसाज सेन्टरहरूमा नियमित आम्दानीका लागि काम गर्ने धेरै युवतीमध्ये उनी पनि हुन् । उनले इन्टरनेटमा आफूलाई कलगर्लका रूपमा स्थापित गराइन् ।
नेपाली युवतीका लागि नेपाली, भारतीय र इन्डोनेशियन, अष्ट्रेलियन लगायतका ग्राहक हुने गरेका छन् । समयअनुसारको सेवा दिने गरेको उनले सुनाइन् । उनीहरू रकम लिएपछि इमान्दारीताका साथ विलम्ब नगरी सेवा दिन्छन् । ‘हामी व्यस्त हुन्छौं, समय कम हुन्छ । अन्यत्र पनि जानुपर्ने हुन्छ । नियमित काममा पनि जानुपर्छ । त्यसकारण ढिलो नगरी सेवा लिनुहोस् ।’,
उनी भन्छिन्,‘होइन भने अन्यत्र जानुपर्छ ।’ उनीहरूलाई यो पेशा अपनाएकोमा पश्चाताप समेत नरहेको सकुन्तला बताउँछिन् । ‘जानेर बुझेर नै यो पेशा अपनाएकी हुँ । खर्चका लागि पैसा चाहिने र पेशामा कुनै अवरोध नभएका कारणले अपनाउन किन अप्ठ्यारो मान्नु ?’, उनी भन्छिन् । यो पेशामा राम्रो आम्दानी भएकै कारणले उनले इन्टरनेटमा आफ्नो सम्पर्क पनि छाडेकी हुन् । उनीजस्तै धेरै युवतीले इन्टरनेटमा यसरी सम्पर्कका लागि खाता खोलेका छन् ।
नेपाली युवतीका लागि नेपाली, भारतीय र इन्डोनेशियन, अष्ट्रेलियन लगायतका ग्राहक हुने गरेका छन् । समयअनुसारको सेवा दिने गरेको उनले सुनाइन् । उनीहरू रकम लिएपछि इमान्दारीताका साथ विलम्ब नगरी सेवा दिन्छन् । ‘हामी व्यस्त हुन्छौं, समय कम हुन्छ । अन्यत्र पनि जानुपर्ने हुन्छ । नियमित काममा पनि जानुपर्छ । त्यसकारण ढिलो नगरी सेवा लिनुहोस् ।’, उनी भन्छिन्,‘होइन भने अन्यत्र जानुपर्छ ।’ उनीहरूलाई यो पेशा अपनाएकोमा पश्चाताप समेत नरहेको सकुन्तला बताउँछिन् ।
‘जानेर बुझेर नै यो पेशा अपनाएकी हुँ । खर्चका लागि पैसा चाहिने र पेशामा कुनै अवरोध नभएका कारणले अपनाउन किन अप्ठ्यारो मान्नु ?’, उनी भन्छिन् । यो पेशामा राम्रो आम्दानी भएकै कारणले उनले इन्टरनेटमा आफ्नो सम्पर्क पनि छाडेकी हुन् । उनीजस्तै धेरै युवतीले इन्टरनेटमा यसरी सम्पर्कका लागि खाता खोलेका छन् ।
अष्ट्रेलियामा रहेका नेपाली युवतीले प्रायः ‘लोकान्टो’मा खाता खोलेका हुन्छन् । सकुन्तला सिड्नी वरिपरि छरिएर रहेका नेपाली मध्येकी एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । यसबाहेक राजधानी क्यानबेरा, मेलबर्न, ब्रिसबेनलगायतका ठाउँमा रहेका नेपाली युवतीले पनि यसरी सेवा दिनका लागि यौनलाई पेशा बनाउने गरेका छन् ।
उनीहरू प्रति घन्टाका दरले सेवाग्राहीसँग शुल्क लिने गर्छन् । यौन पेशा भने उनीहरूको प्रमूख पेशाचाहीँ होइन । अन्य कामलाई प्रमुख पेशा बनाएर अतिरिक्त तर बलियो आम्दानीका लागि यो पेशामा संलग्न हुँदै आएका छन् । नेपाली समुदायको जनसंख्या थपिँदै गएपछि कलगर्लका रूपमा नेपाली युवतीको संख्या पनि बढिरहेको अनुमान गरिएको छ ।-नंया बाटोबाट